गायन करियरमा फड्को मार्दै ममता राई - Samadarshi Sanchar
गायन करियरमा फड्को मार्दै ममता राई
समदर्शी संचार, मङ्गलबार, ३० मंसिर, २०७७, साँझको ०६:०४ बजे
गायिका ‘ममता राई’ बुवा धनकर्ण राई र आमा राधा राईको कोखबाट साबिक खोटाङ जिल्लाको बुइपा ३ (हाल मझुवागडी नगरपालिका) मा जन्मनु भएको हो । गितकार प्रेमराज राईको शब्द र संगीतकार विनोद खम्बुको संगीतमा रहेको गीत शिरफुल दर्शक स्रोताले सर्वाधिक रुचाउँनु भएको छ । ‘म त मायामा हारेको मान्छे’ बोलको गीतबाट संगीतमा डेब्यू गरेको राईले ‘ममता –२०७०’ र ‘ममता २–२०७४’ साँगितिक एल्बम सार्बजनिक गरिसकेकी छिन् । प्रस्तुत छ समदर्शी सञ्चार अनलाइन पत्रिकाले उनीसँग गरेको कुराकानी –
तपाईलाई समदर्शी अनलाइनमा स्वागत छ । –धन्याबाद समदर्शी अनलाईन टिमलाई, अनि मेरा सम्पूर्ण स्रोता दर्शकलाई बिशेष सम्झना माया व्यक्त गर्दछु ।
तपाई आफुलाई कस्तो गायिकाको रुपमा चिनाउन चाहानुहुन्छ ? – मैले अहिले सम्म धेरै फ्लेभरको गीत गाएको छु । लोकपप, सिलीपप जस्ता गीतहरु गाएको छु । म शास्त्रीय संगीतको विद्यार्थी भएकोले त्यसमा मेरो अलिक बढी झुकाव छ । शास्त्रीय संगीतबाट नै आफ्नो परिचय बनाऔं भन्ने सोच नै हो तर काम चाही लोकगीतमा धेरै गरेको छु । संगीतकार ज्यूहरुले पनि त्यसैमा राम्रो छ भन्नु हुन्छ ।
गायन क्षेत्रमा लाग्नको लागी जीवनमा कस्तो संघर्ष गर्नु भएको छ ?
– मेरो दिदिहरु हुनुहुन्छ आर्थिक रुपले साइली दिदिले धेरै नै सहयोग पुुर्याउँनु भएको छ । संगीत शिक्षा लिने र अन्य धेरै कुरामा वहाँको सपोर्ट रहेको छ । संगीत भनेको महासागर रहेछ । हल्का सोचेर घर परिवारको सल्लाह विना काठमाडौं आएको थिएँ तर पछि सल्लाह भयो र दिदिहरुले मेरो साँगितीक करियरको लागि महत्वपूणृ साथ दिनु भयो ।
पे्ररणाको स्रोतको रुपमा साथीभाई र शुभचिन्तकहरुको नाम लिनु पर्दा क–कस्को लिन चाहानुहुन्छ ?
– गायिका नै एकजना साथी हुनुहुन्छ बेनु राउत, गायन क्षेत्रकै अग्रज तुलसी बस्नेत ज्यूहरुलाई प्रेरणा र हौसलाको स्रोतको रुपमा नाम लिन चाहान्छु ।
आफ्नो गीत यात्रा गरेको वेला गाडिमा बज्यो भने कस्तो महसुष हुँदो रहेछ ? अनुभव गर्नु भएको छ ? – जो पनि खुशी हुने त कुरै भयो । एक पटक कतै यात्रा गर्दा मेरो गीत गाडिमा बजी रहेको थियो । त्यहाँ मलाई कसैले पनि चिन्नु त भएन । मेरो गतिको फ्यान फलोवर्स पनि हुनुहुदो रहेछ भन्ने लागेर मनमनै खुशी लाग्यो ।